Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » FAA amin'ny mpandoa $ 14,500 XNUMX amin'ny onitra amin'ny fanelingelenana ireo mpikarakara ny sidina
Sazy sivily $ 14,500 natolotra ny mpandeha kaompaniam-pitaterana an'habakabaka noho ny fanelingelenany ireo mpikarakara ny sidina izay nanome toromarika azy mba hisaron-tava ary ajanona ny fisotroany alikaola izay navoakany tao anaty fiaramanidina
Nameno ny mpandeha nipetraka teo akaikiny ilay mpandeha, niteny mafy ary tsy nety nanao saron-tava
Na eo aza ny fampitandreman'ireo mpiasan'ny sidina dia nanohy nanala ny saron-tava izy ary nisotro toaka azy
Ny mpikarakara ny sidina dia namoaka ny «Fampandrenesana hampitsaharana ny fitondran-tena tsy ara-dalàna sy tsy ekena»
Ny departemantan'ny fitaterana any Etazonia Fitondrana federaly federaly (FAA) manolotra sazy sivily $ 14,500 XNUMX amin'ny mpandeha fiaramanidina noho ny resaka fanelingelenana ireo mpiasan'ny sidina izay nanome toromarika azy mba hisaron-tava ary hijanona tsy hisotro toaka izay nateriny tao anaty fiaramanidina.
Amin'ny 23 Desambra 2020 fiaramanidina jetBlues sidina miala ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy International (JFK) any New York mankany amin'ny Repoblika Dominikanina, nitangorona ilay mpandeha nipetraka teo akaikiny ny mpandeha, niteny mafy, ary tsy nety nanao saron-tava, hoy ny FAA. Ireo mpikarakara ny sidina dia namindra ilay mpandeha hafa tamina seza hafa rehefa nitaraina momba ny fihetsik'ity lehilahy ity izy.
Nisy mpiambina sidina nampitandrina an'io lehilahy io fa ny politikan'ny jetBlue dia mitaky azy hisaron-tarehy, ary indroa nampitandrina azy fa ny lalàna mifehy ny FAA dia mandrara ny mpandeha tsy hisotro toaka entin'izy ireo ao anaty fiaramanidina. Na eo aza ireo fampitandremana ireo dia nanohy nanala ny saron-tavany sy nisotro zava-mahamamo azy ny mpandeha, hoy ny filazan'ny FAA.
Nisy mpanamory fiaramanidina namoaka "Fampandrenesana hampitsaharana ny fitondran-tena tsy ara-dalàna sy tsy mendrika", ho an'ny mpandeha, ary nampandre ny kapiteny ny kapiteny ny amin'ny fihetsiny indroa. Vokatry ny fihetsiky ny mpandeha dia nanambara ny loza tampoka ny kapiteny ary niverina tany JFK, izay nahatonga ilay fiaramanidina nilanja 4,000 pounds ny lanjany noho ny habetsahan'ny solika tao anatiny.
30 andro ny mpandeha taorian'ny nahazoany ny taratasy fampiharana ny FAA hamaly ny masoivoho.